နည်းပညာ | ngalone
Tag Archives: နည်းပညာ
Firefox ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်အောင်လုပ် နည်း
Firefox အသုံးကြာလာတာနဲ့ အမျှ browser က နှေးလာတက်ပါတယ်။Error တွေဘာတွေ တက်ပြီးသုံးရတာ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဖြုတ်ချပြီး ပြန်တင်ရင်တော့ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကုန်တယ်၊ software မရှိယင် လဲအခက်။ fb ကနေသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အကူအညီတောင်းတာနဲ့ ဒိနည်းလေးကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဒါတွေကိုအလွယ်ဆုံး၊ အမြန်ဆုံး နည်းနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့ firefox လေးလာရင် ဒိနည်းနဲ့သာဖြေရှင်းလိုက်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ bookmarks တွေကို ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင် bookmarks တွေကို html ဖိုင်အနေနဲ့ export လုပ်ထားလိုက်ပါ။ လုပ်နည်းက – bookmarks ထဲ့က show all book mark (Ctrl+Shift+B) ကိုနှိပ် ပြီး Input and backup အောက်က export bookmark to html ကိုနှိပ်ပြီး လမ်းကြောင်းရွေး save လုပ်ထားလိုက်ပါ။
ပြီးရင် firefox ကို ပိတ်လိုက်ပါ။Run box (window key+R)ကို ဖွင့်ပြီး firefox.exe -P လို့ ရိုက် enter ချပါ။
ဒိလိုမျိုးလေး တက်လာပါလိမ့်မယ်။ create profile မှာနှိပ်ပြီး next- next finish ဆိုရင် ok သွားပါပြီ။
export လုပ်ထားတဲ့ bookmarks တွေကို ပြန် input လုပ်လိုက်ပါ ။ input from html ကို နှိပ်ပြီး လုပ်လိုက်ပါ။
မိတ်ဆွေရဲ့ firefox က မျက်လှည့်ပြသလို မြန်ဆန်လာပါလိမ့်မယ်။
အဟောင်းအတိုင်းပြန်သုံးချင်ရင် လဲရပါတယ်။ firefox.exe -P ကို နှိပ် enter ခေါက်ပြီး ခုနားက လုပ်ထားတဲ့ profile ကို delete လုပ်လိုက်ရင် ရပါတယ်။
» http://www.pearsonpte.com မြန်မာပြည်တွင်းအွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာ 4scale ဖြေဆိုနိုင်သောဝက်ဆိုက်
» http://www.Yuonline-wbts.com ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် onlineစာမေးပွဲဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.ru-mm.org ရုရှားမြန်မာအဘိဓာန်ကိုအခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ဆိုက်
» http://www.worldenglishinstitute.org ရေးဖတ်ပြော အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ အခမဲ့ လေ့လာနိုင်တဲ့
» http://www.pearsonpte.com မြန်မာပြည်တွင်း အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာ 4scale ဖြေဆိုနိုင်သောဆိုက်ပါ
» http://www.Ielts.org အင်္ဂလိပ်စာ IELT စာမေးပွဲဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.Juniper.net နိုင်ငံတကာအခမဲ့ Network စာမေးပွဲအကြောင်း ပါသောဝက်ဆိုက်
» http://www.studying-singapore.com ပြည်ပမှတက္ကသိုလ်များကို onlineမှတက်ရောက်နိုင်ရန်ကြည့် ရှု နိုင်သောဆိုက်
» www. internationalstudent.com နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့လူငယ်ကျောင်းသားများ အတွက် ဝက်ဆိုက်
» http://www.burmait.net နိုင်ငံရပ်ခြားပညာသင်ကြားလိုသူများအတွက် ပညာသင်ဆုများ အကြောင်းဝက်ဆိုက်
» http://www.niied.go.uk တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ပြီးသူများ ကိုရီးယားပညာသင်ဆု လျောက်နိုင်သောဝက်ဆိုက်
» http://www.Jasso.go.JP မြန်မာကျောင်းသားတွေကို နှစ်စဉ်ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကျင်းပပြီးပညာသင်ဆုပေးနေတဲ့ဆိုက်
» http://www.bca.ac.uk ukနိုင်ငံဘာမင်ဂမ်မြို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.W.L.C.co.uk ukနိုင်ငံ၏ wlc ကောလိပ်၏ဝက်ဆိုက်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန့်များ
» http://www.eol.org သက်ရှိများအကြောင်းစာမျက်နှာပေါင်း၃၀၀၀၀ကျော်ဆိုက်
» www. sickgodfishcare.com အလှမွေးရွှေငါးလေးများအကြောင်းဆိုက်
» http://www.citypetguide.com အလှမွေးခွေးများအကြောင်းဆိုက်
» http://www.beautifulhairstyles.com ဆံပင်ပုံဆံအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာနိုင်တဲ့ဆိုက်ပါ
» http://www.hearandplay.com ဂစ်တာနှင့်စန္ဒယားလေ့လာသူများအတွက်ဆိုက်ပါ
» http://www.element.mucter.mm.org ဓာတုဗေဒဒြပ်စင်များဇယားကိုမြန်မာလိုဖော်ပြသောဆိုက်
» http://www.m-w.com အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေအသစ်အသစ်သောစကားလုံးတွေတွေ့နိုင်တဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.readthekanji.com ဂျပန်စာကိုအခမဲ့နှင့်အခပေးလေ့လာ လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့ဆိုက်
» http://www.babycenter.com ကလေးတစ်ယောက်ကုို အရွယ်ရောက်တဲ့အထိပြုစုပျိုးထောင်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေပါတဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.envirope-dea.org.uk ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနဲ့ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်လာရခြင်းလေ့လာဖို့ဝက်ဆိုက်
» http://www.shootgar-dening.co.uk ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်တစ်ခုပါ
» http://www.librivox.org ယဉ်ကျေးမှု၊ဘာသာရေးပညာရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှရေးသားချက်တွေကို အသံဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းပေးထားတဲ့ဆိုက်
» www. grammar.ccc.commnet.edu သဒ္ဒါနဲ့အရေးကိုရှင်းပြထားတဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.soundjunction.org ဂီတတူရိယာတီးခတ်ပုံတွေသံစဉ်တွေအကြောင်း၊ဆိုက်
» http://www.diseno-art.com စက်တပ်ယာဉ်ဒီဇိုင်းတွေတစ်စီးချင်းဖော်ပြထားသောဆိုက်
» http://www.weath-erpixie.com ကမ္ဘာအနှံ့ကမိုးလေဝသရာသီဥတုကိုကာတွန်းရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့ဖော်ပြ ပေးထားတဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.quotationmarks.blogspot.com အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် quotationများကြောင့်မူလအဓိပ္ပါယ်နှင့် လွဲချော်သွားသည်များကိုစုစည်းဖော်ပြပေးသည့်ဝက်ဆိုက်
» http://www.brashawfoundation.com ရှေးဦးလူသားများ၏ အနုပညာလက်ရာများနှင့် ပန်းချီ၊စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများဖော်ပြထားသောဝက်ဆိုက်
» http://www.bibliodyssey.com ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်များနှင့် သမိုင်းလေ့လာသူများ အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အထောက်များပါသောဝက်ဆိုက်
» http://www.acronym-finder.com အင်္ဂလိပ်စာလုံး အတိုကောက်တွေ လေးသန်းကျော်ကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.intstyle.com နိုင်ငံတကာလူအမျိုးမျိုးရဲ့ အမူအရာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေအကြောင်းတင်ပြထားတဲ့Blogတစ်ခု
» www. allmagic.com အဆင့်မြင့်မျက်လှည့်ပညာတွေအကြောင်းဝက်ဆိုက်ပါ
» http://www.scho-olr.com ဂူဂဲလ်၊ ဝီကီပီးဒီးယား၊ အဘိဓာန်၊ စွယ်စုံကျမ်း၊ဘာသာပြန်၊ ယူနစ်ပြောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်တဲ့ဆိုက်
» http://www.pseu-dodictionary.com အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နောက်ဆုံးပေါ်အသုံးတွေ၊ အင်တာနက်ဘန်းစကားတွေ၊စကားစုတွေအကြောင်းသိနိုင်တဲ့ဆိုက်
» www. chess.com စစ်တုရင်ကစားနည်းစည်းမျဉ်းတွေ လေ့လာနိုင်၊ ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းကစားနိုင်တဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.problogger.net ဘလော့ဂ်တွေကနေဝင်ငွေဖန်တီးနိုင်ဖို့၊ဘလော့ဂ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့လေ့လာနိုင်တဲ့ဆိုက်ပါ
» http://www.stop-motionanimation.com ရုပ်ရှင်အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကိုလေ့လာနိုင်သည့်ဆိုက်
» http://www.readymech.com စက္ကူရုပ်ခေါက်ချင်သူတွေအတွက်အရောင်အသွေးစုံလင်
» http://www.greatbuildings.com ဘီစီ ၃၀၀၀ ကာလ ဂရိဘုရားကျောင်းတွေကအစ ယခု
် ခေတ်ထိအဆောက်အအုံ၁၀၀၀ကျော်ကို ပြထားသည်
» http://www.stuckincustoms.com အစစ်နဲ့ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ဖန်တီးပုံ ဖန်တီး
» http://www.arteventmyanmar.multiply.com ပြည်တွင်းးပြည်ပပန်းချီအနုပညာရှင်များ၊ပြခန်းများ၊လိပ်စာများနှင့်ဂီတစုံပါဝင်တဲ့ဆိုက်
» http://www.myanmarphotoimage.com မြန်မာ့ဓာတ်ပုံအနုပညာဝက်ဆိုက်(သင့်ဓာတ်ပုံတွေကိုတင်နိုင်)
» http://www.myanmar-Image.com မြန်မာ့ဓာတ်ပုံအနုပညာဝက်ဆိုက်ပါ
» awkwardfamilyphotos.com ထူးထူးဆန်းဆန်းအိုက်တင်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနမူနာလေးတွေလေ့လာဖို့ရှိတဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.artistdirect.com ကမ္ဘာကျော်MTVသီချင်းနှင့်အနုပညာရှင်များအကြောင်းA.toz ဖော်ပြထားတဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.music.e-favourite.com ကမ္ဘာကျော်MTVသီချင်းနှင့်အနုပညာရှင်များအကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.rosab.net နှစ်စဉ်ပန်းချီစကောလားရှစ်တွေခေါ်တဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.4.retmuseum.org အနုပညာဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.wdL.org ဘီစီ ၈၀၀၀ ကနေဒီနေ့အထိကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံများကိုဖော်ပြထားတဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.arteyelopedia.com ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်များစွာရဲ့လက်ရာတွေကိုအမည်ြပတိုက်၊အမျိုးအစားစတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ရှာနိုင်တဲ့ဆိုက်
» http://www.artrenewal.org အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းအနုပညာပြတိုက်၏ဝက်ဆိုက်
» http://www.new7wonders.com ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်အဆောက်အအုံနေရာတွေ အရာတွေကိုနှစ်စဉ်ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးတဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.pearsonpte.com မြန်မာပြည်တွင်းအွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာ 4scale ဖြေဆိုနိုင်
» http://www.worldenglishinstitute.org ရေးဖတ်ပြော အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ အခမဲ့ လေ့လာနိုင်တဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.W.L.C.co.uk ukနိုင်ငံ၏ wlc ကောလိပ်၏ဝက်ဆိုက်
» http://www.quotationmarks.blogspot.com အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် quotationများကြောင့်မူလအဓိပ္ပါယ်နှင့် လွဲချော်သွားသည်များကို စုစည်းဖော်ပြပေးသည့်ဝက်ဆိုက်
» http://www.brashawfoundation.com ရှေးဦးလူသားများ၏ အနုပညာလက်ရာများနှင့် ပန်းချီ၊စိုက်
» http://www.bibliodyssey.com ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်များနှင့် သမိုင်းလေ့လာသူများ အတွက်
» http://www.pseu-dodictionary.com အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နောက်ဆုံးပေါ်အသုံးတွေ၊အင်တာနက်ဘန်းစကားတွေ၊စကားစုတွေအကြောင်းသိနိုင်တဲ့ဆိုက်
» http://www.readymech.com စက္ကူရုပ်ခေါက်ချင်သူတွေအတွက်အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့စက္ကူရုပ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာရှိတဲ့ဆိုက်
» http://www.greatbuildings.com ဘီစီ ၃၀၀၀ကာလဂရိဘုရားကျောင်းတွေကအစယခုခေတ်ထိအဆောက်အအုံ၁၀၀၀ကျော်ကို ပြထားသည်
» http://www.stuckincustoms.com အစစ်နဲ့ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ဖန်တီးပုံ ဖန်တီးနည်းကိုရေးသားထားတဲ့ဝက်ဆိုက်
» http://www.cities.com ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးပေါင်း ၄၀၀၀ကျော်ရဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြထားတဲ့ဆိုက်ပါ
» http://www.wdL.org ဘီစီ ၈၀၀၀ ကနေဒီနေ့အထိကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံများကိုဖော်ပြထားတဲ့ site ပါ
» http://www.cnn.com/weather နိုင်ငံတကာမိုးလေ၀သဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.bbeworld.com နိုင်ငံတကာမိုးလေ၀သဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.weather.com နိုင်ငံတကာမိုးလေ၀သဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.theweathernetwork.com နိုင်ငံတကာမိုးလေ၀သဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.earthsky.com နိုင်ငံတကာမိုးလေ၀သဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.spikesworld.spik-jamie.com နိုင်ငံတကာမိုးလေ၀သဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.epa.gov နိုင်ငံတကာမိုးလေ၀သဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.epa.gov/kids နိုင်ငံတကာမိုးလေ၀သဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.seismo-watch.com မြေငလျင်ဆိုင်ရာသတင်းဝက်ဆိုက်ပါ
» http://www.aboutflowers.com ပန်းမျိုးစုံအကြောင်းဖော်ပြထားသည်
» http://www.robtcaze.com စက်ရုပ်အကြောင်းပါသောဆိုက်
» www. paclp.com ရုပ်ရှင်များအတွက်soundEffectများနှင့်အခြား Link
» http://www.4.hairctyles.com ဆံပင်ပုံမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့ဆိုက်
» http://www.Supercook.com အချက်အပြုတ်ဆိုင်ရာဆိုက်
» http://www.Nation Master.com ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံရဲ့လူမှုရေး ၊စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး ၊ပထဝီဆိုင်ရာပေါင်းစုံဖေါ်ပြပေးထားတဲ့ဆိုက်
» http://www.video Processor.com ကွန်ပြူတာဆိုင်ရာအွန်လိုင်းသင်္ခန်းစာတွေဗီဒီယိုတွေကိုသင်နိုင်တဲ့ဆိုက်
» http://www.yellowpages.com ကမ္ဘာ့မြေပုံလမ်းညွှန်ဆိုက်များ
» http://www.superpages.com ကမ္ဘာ့မြေပုံလမ်းညွှန်ဆိုက်များ
» http://www.YP.yahoo.com ကမ္ဘာ့မြေပုံလမ်းညွှန်ဆိုက်များ
» http://www.science.com သိပ္ပံသုတဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» http://www.animal.discovery.com တိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာသုတများရှိသည့်ဝက်ဆိုက်
» http://www.lizeh*****.com တိုတိုထွာထွာနည်းပညာများ၏ဝက်ဆိုက်
» http://www.petaztheday.com တိရစ္ဆာန်များအကြောင်းဝက်ဆိုက်
» http://www.cuzeovenload.com ထူးဆန်းတဲ့တိရစ္ဆာန်များ
» http://www.sclencedaily.com ကမ္ဘာကြီးရဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုပုံမှန်ဖေါ်ပြပေးနေတဲ့ဆိုက်
» http://www.techcrunch.com ပညာရှင်တွေရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသတင်းတွေဖော်ပြပေးထားတဲ့ဆိုက်
» http://www.cartalk.com ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကမော်တော်ကားအကြောင်းဆိုက်
» http://www.bmw.com မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.toyota.com မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.lexus.com မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.mercedes-benz.com မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.familycar.com မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.supercars.net မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.mitsubishi-motors.co.th မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.carsdirect.com မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.auto.howstuffworks.com မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.fast-autos.net မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.cars.com မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.audi.com မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.minicooper.org မော်တော်ကားဝက်ဆိုက်များ
» http://www.arteventmyanmar.multiply.com ပြည်တွင်းးပြည်ပပန်းချီအနုပညာရှင်များ၊ပြခန်းများ၊
» http://www.artistdirect.com ကမ္ဘာကျော်MTVသီချင်းနှင့်အနုပညာရှင်များအကြောင်း
» http://www.wdL.org ဘီစီ ၈၀၀၀ ကနေဒီနေ့အထိကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံများကို
» http://www.arteyelopedia.com ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်များစွာရဲ့လက်ရာတွေကိုအမည်၊
» http://www.new7wonders.com ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်အဆောက်အအုံနေရာတွေ အရာတွေကို
» http://www.Yellowmappages.com ရန်ကုန်မြို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ကိုမြေပုံပေါင်း ၂၀၀
» http://www.myanmarUReady.com အိမ်ခြံကားဝယ်ရောင်းအကျိုးဆောင်ဆိုက်
» http://www.myanmarhotjobs.com မြန်မာပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ကြော်ငြာများကိုကြည့်နိုင်
» http://www.employmentbestselect.com ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေရန်ဆိုက်
» http://www.yangondirectory.com ရန်ကုန်လမ်းညွှန်စာအုပ်ရဲ့ site
» http://www.mandalaydirectory.com မန္တလေး လမ်းညွှန်စာအုပ်ရဲ့ site
» http://www.essentialforall.com ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဈေးဝယ်လမ်းညွှန်
» http://www.Themyanmardirectory.com မြန်မာ လမ်းညွှန်
» www. xe.com ကမ္ဘာ့ငွေကြေးလဲနှုံးဖေါ်ပြထားတဲ့ site
» http://www.kitco.com ကမ္ဘာ့ရွှေ၊ငွေ၊ပလက်တီနမ်စသည့်ဈေးနှုံးနှင့်ငွေလဲနှုန်း
Gmail account သစ်ဖွင့်ရန်
မေးလ် အကောင့် အသစ်ဖွင့်ရန် အခက်အခဲ တွေ့ကြုံ နေရာမှ ယခုအခါ ကိုင်တိုင်အခမဲ့ အကောင့်သစ် လျှောက်ထားနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်များကိုအခကြေးငွေ ပေး ဆောင်ရွက်စရာ မလိုတော့ဘဲ ယခုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါက အကောင့်သစ်ကို လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကောင့်သစ်ဖွင့်လိုသူများအနေဖြင့် မေးလ်အကောင့်ကို Web Proxy မှကျော်ပြီးဖွင့်လို့ရနိုင်ပါသည်။ အကောင့်များသည်ယခုအခါ သမရိုးကျဖွင့်ရန်ခက်ခဲ နေသည်မှာ ကာလအတန်ကြာနေခဲ့ပါပြီ။
ယခုကဲ့သို့ Proxy ကျော်ဖွင့် ရာ တွင်Login Name ကို Chat Availability မစစ်ရဘဲ လိုအပ်သည်များကို အားလုံး ဖြည့်စွက် ပြီးနောက်ဆုံး Account လုပ်ရန် နှိပ်လိုက်သည့်အခါ မှာ Login Name မရလျှင်ပြန်ဖြည့် ထည့်ပြီး ပြန်ဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်မှာ – ပထမဦးစွာ http://hidemyass.com ကိုအရင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးလျှင် Box ထဲတွင် http://mail.google.com ဟုရိုက်ထည့်ပြီး Hide My Ass Buttom ကိုနှိပ်ပါ ။ ထိုသို့ နှိပ်လျှင် Access Denied ဟိုပေါ်နေလျှင် Box အောက်နားလေးမှ SSL Security ကို On ထားရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ် ပြီး Gmail Window ကျလာလျှင် Creat an account ကိုကလစ်လိုက်ပြီး ပိုမှန်ဆောင်ရွက်နေကျအတိုင်း ဖြည့်စွက် ပြီး အကောင့်ဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အကောင့်သစ် ဖွင့်ရာတွင် ကော်နက်ရှင် ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်ပြီး ကော်နက်ရှင်နှေးနေလျှင် သုံးလေးခါလောက် ကြိုးစားဖြည့်စွက် ပြီးဖွင့်ရန် F5 ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
GTalk မှာ ရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့ Chat ရအောင်
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောပါတယ် ..Gtalk မှာသင်္ကတာလေးတွေကိုဘယ်လို ရိုက်ရမလဲ..သိရင်ပြောပေးပါတဲ့..ဒါနဲ့ ကျွန်တော်သိတဲ့ gtalk sign လေးတွေကို ပြောပေးလိုက်ပါတယ်…ဒါနဲ့ ပြီးရောလား မပြိးသေးပါဘူး..ပုံတွေမပေါ်ပြန်ဘူးတဲ့…ဟုတ်ကဲ့ ဒါလေးတွေမသုံးခင် Gtalk Theme လေးတော့ install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။မလုပ်ထားသေးရင် ရှာပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ။Install လုပ်ပြီးရင် Google Talk ကိုသွားပါ..Setting ထဲ့က appearance ထဲ့မှာ my theme ကိုရွေးပြီး Ok လုပ်ထားလိုက်ပါ ။ ဒါဆို Gtalk မှာ သရုပ်ဖေါ်ပုံလှလှလေးတွေနဲ့ စကားပြောလို့ ရပါပြီ။
1.All the Best – – :atb (သိပ်ကောင်းတယ်)
2.Angel – O:-) – :angel(နတ်သမီးလေး)
3.Angry – X-( – :angry(စိတ်ဆိုးတယ်)
4.Applause – =D – :clap(အားပေးပါတယ်)
5.Bath – – :bath (ရေချိုးနေတယ်)
6.Batting eyelashes – ;;) -(မျက်နှာနီအောင်ရှက်တယ်)
7.Big Grin – 😀 -(မျက်နှာနီအောင်ရှက်တယ်)
8.Blushing – : -B – :blush(မျက်နှာနီအောင်ရှက်တယ်)
9.Broken Heart – =(( –
10.Call me – :c – :callme(ဆက်သွယ်ပါ)
11.Confused – –
12.Cool – B-) – :cool(အေးအေးဆေးဆေးပါ)
13.Crying – 😦 ( – :waa(ငိုနေတယ်)
14.Day Dreaming – : -Y – :dream(နေ.လည်ခင်းအိပ်မက်)
15.Dislike – 😛 P – :naa(မကြိုက်ပါ)
16.Do Not Disturb – – :dnd(မနှောက်ယှက်ပါနှင့်)
17.Drooling – =P~ – :hee
18.Game – – :game(ကစားမယ်)
19.Ghoting – – :ghoting(စဉ်းစားနေတယ်)
20.Gud Morning – – :gm(ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ)
21.Gud nite – – :gn(ကောင်းသောညပါ)
22.Heart – – :heart(အချစ်)
23.Hi – : -h – :hi,hai(နှုတ်ဆက်တယ်)
24.Hit – := –
25.Hug – – :hug(ပွေ.ဖက်မယ်)
26.I am Mad – ~x( – :mad(ငါရူးတော့မယ်)
27.I love you – – :ilu(မင်းကိုချစ်တယ်)
28.I miss you – – :imu (မင်းကိုသတိယနေတယ်)
29.Idea – – :idea(အကြံရပြီ)
30.Kissing – : -* – :kiss (နမ်းမယ်)
31.Laughing – 🙂 ) – :ha(ရီရတယ်)
32.Laughing – =)) – :haha(ဟားတိုက်ရီရတယ်)
33.Love struck – 😡 – :love(ချစ်ကြောင်းပြောမယ်)
34.Mess – – :mess (စားမယ်)
35.Movie – – :movie(တီးထည့်လိုက်ရမလား)
36.Nail bitting(Jealous)- :SS – :j
37.News – – :news(သတင်း)
38.No – |-: – :no(မ_ဘူး)
39.No – – :no
40.Not talking – ]-( – :calm(မပြောဘူး)
41.Now – – :now (ယခု)
42.On Phone – 🙂 ] – :call (Ph နှင့်ပြောမယ်)
43.Pray – – :pray(ဆုတောင်းနေတယ်)
44.Raised Eyebrow – /:) – :cha(မျက်ခုံးတွန်.ပြီး နောက်ပြောင်)
45.sad – 😦 –
46.Secret/Silent – : -$ – :shh (တိတ်တ်ိတ်နေ)
47.Shut Up – – :shutup(ပါးစပ်ပိတ်ထားပါ)
48.Sleep – – :sleep(အိပ်နေတယ်)
49.Sleepy – I-) – :zz(အိပ်ချင်ပြီ)
50.smiling – 🙂 –
51.Smug – – :mm(မျက်ခုံးပင့်ပြီး နောက်ပြောင်ခြင်း)
52.Sorry – – :sry(၀မ်းနည်းပါတယ်)
53.Stop shouting – : -T – :stop(နားပိတ်ထားတယ်)
54.Straight face – 😐 –
55.Surprised – :O – :oh(အံသြတယ်)
56.Take care – – :tc(ဂရုစိုက်ပါ)
57.Thanks – – :thanx(ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
58.Thinking – : -? –
59.Tongue – 😛 –
60.Wait – =; – :wait(ခဏစောင့်ပေးပါ)
61.Waving, Bye – : -h – :bye(နှုတ်ဆက်ပါတယ်)
62.iWinking – 😉 –
63.Worried – : -S – :wor(စိတ်ပူနေတယ်)
64.Yahooooo – ||-) – :yahoo( ရှာကြည့်ပါ)
65. Yes – – :yes(ကောင်းပါပြီ)
Gtalk မှာ သူငယ်ချင်းတွေ အဖွဲ့လိုက်စကားပြောရအောင်(Gtalk Party Chat)
၉။ ကဲ…အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ပြောချင်သလောက် ပြောလို့ရပါပြီ။
/create chat_name password – party chat တစ်ခုဖန်တီးရန်၊ password ပေးချင်ပါက chat_name နောက်မှာ space ပုတ်ပြီး password ပေးနိုင်ပါတယ်။
/join chat_name password – party chat တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ရန်၊ ထို chat သည် password ပေးထားပါက chat_name နောက်တွင် space ပုတ်ပြီး password ထည့်ပြီး enter ခေါက်ပါ။
/exit – party chat ကနေ ထွက်ဖို့ပါ။
/list – chat ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူအရေအတွက်ကို ကြည့်ရန်။
Conputer ကိုပိုမို မြန် ဆန်စေရန်
ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်..ရိုးရိုးသားသားပြောတာပါ…သူများဆိုဒ်တွေကနေ စုဆောင်းထားတာပါ။ ဒိနည်းလမ်းလေးတွေကတော့ မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို သွက်သွက်လက်လက်ဖြစ်လာစေ ပါလိမ့်မယ်……
“Menushowdelay” ကို Right click နှိပ်ပါ။ Modify ကိုရွေးပြီး Value ကို “0″ ထားပါ။ြ
မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းပစ်ရင် ပိုမြန်ဆန် စေပါတယ်။
မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းပစ်ရင် ပိုမို မြန်ဆန် စေပါတယ်။
– အဲဒီမှာ တွေ့သမျှ ဖိုင်တွေကို ‘Ctrl+A’ နဲ့ Select ပေးပြီး ဖျက်ထုတ်ပစ်ပါ။ (အချို့  လုပ်ဆောင်နေဆဲ
– Accessories ကနေတစ်ဆင့် “System tools” အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ “Disk Clean Up” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ၅
မသုံးတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပါ။
– ညာဘက် အ စွန်းဆုံးမှာ “Start up tab” ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
– ကိုယ့်အ တွက် အသုံးမ၀င်တဲ့ program တွေရဲ့  ရှေ့  မှာ အ မှန်ခြစ် အ မှတ် အ သား လုပ်ထားခဲ့ရင် ပြန်ပြီး
လုံခြုံစေဖို့ ဖိုင်စနှစ် ပြောင်းသုံးပါ။
– တကယ်လို့ NTFS ပြောင်းပြီးသား ဆိုရင် ပြောင်းဖို့ မလိုပါ။ My computer ကို Right Click နှိ်ပ်ပြီး
– XP ရဲ့ default မှာ memory ရေရှည် အသုံးခံနိုင်အောင်နဲ့ တခြား လိုအပ်တဲ့ စနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကို
– “Memory Managment” ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ညာဘက် panel မှာ ရှိတဲ့ “Disable pasing executive” ကို
ဖိုင်တွေကိုလုံခြုံစေဖို့ password ပေးပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်တွေ၊ folder တွေ၊ ebook စတာတွေကို လုံခြုံစေဖို့ နည်းလမ်းအ မြောက်အ မြား ရှိပါတယ်။ password ပေးပြီး သိမ်းဆည်းထားတာဟာ အ လုံအခြုံဆုံးပါပဲ။ အဲဒီလို password ပေးတဲ့အ ခါမှာ သိမ်းဆည်းချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို folder တစ်ခုထဲကို အ ရင်ထည့်ပါ။ ပြီးရင်ကိုယ်မှတ်မိတဲ့ Name ပြောင်းပါ။ ပြီးရင် Windows ရဲ့ built-in zip format ကို password ပေးပါ။
– File menu အောက်မှာရှိတဲ့ Addapassword ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖိုင်တွေ လုံခြုံစေဖို့ ရုပ်ဖျက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုထားတဲ့ ဖိုင်မှန်သမျှဟာ အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ extension နဲ့ အဆုံးသတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ebook စာအုပ်တွေဆိုရင် (.pdf)၊ စာစီစာရိုက် ဆော့ဖဲဝဲ pagemaker ဆိုရင် (.pmd)၊ Photoshop ဆိုရင် (.psd) (.jpg) စတဲ့ အဆုံးသတ် extension တွေပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ extension တွေကို ဖော်ထားလို့ ရသလို
– အခု ဖုံးကွယ်ထားမယ့် ဖိုင်တစ်ခုကို extension ပြောင်းပေးပါ။ ဥပမာကိုယ်က (.pmd)နဲ့ စာရိုက်ထားတဲ့ page
– အဒီအခါမှာ ကိုယ့်ဖိုင်ဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ မမှတ်မိ နိုင်တော့တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစား တစ်ခုအနေနဲ့
ပရိုဂရမ်ရဲ့ အမြန်နှုန်းတွေကို မြှင့်တင်ပါ်။
– ‘Task Manager’ ထဲကမှ ‘process tab’ ကို ရွေးချယ်ပါ။ ကိုယ့် ပီစီထဲမှာ ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ၊ browser တွေ
Memory နည်းပါးနေတဲ့ အခါ
အမြဲလို ကြုံရဘူးပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲ နှစ်ခုလောက်ပြိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ‘Memory Inerupt’ ဆိုပြီး ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ကို ပိတ်သွားတာမျိုး ရှိသူတွေအတွက် လျှော့ချသင့်တဲ့ ပုံစံတွေ ရှိပါတယ်။ XP မှာ အသစ်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ feature အသစ်ဟာ momery ကို အလွန်သုံးစဲသွ လို “Thames” တွေကလည်း memory ကို သုံးစွဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် Style XP လို “Thames” တွေကို memory မြင့်မြင့်မားမား မရှိဘဲနဲ့ install မလုပ်ပါနဲ့။ Window ရဲ့ ဂန္တ၀င် ပုံစံဟာ memory ကို ချွေတာရာရောက်ပြီး အလုပ် များများရှိတဲ့ လူတွေအဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
– ‘Performance’ မှာ ’setting’ ဆိုတာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ setting ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ‘Adjust for best
Automatic update ကို ပိတ်သင့်ပါသလား။
ပရိုဂရမ်တွေကို Shortcuts တွေ တည်ဆောက်ထားပါ။
‘Shut-down’ shortcut ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
– ပြီးရင် properties ကို သွားပါ။ Target နေရာမှာ “C:/Windows/system32/shutdown.exe”ကို ရွေးပေးပါ။
Keyboard shotcut တွေကိုသုံးပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တချို့  Fonts တွေဟာ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ စာစီစာရိုက် သမားတစ်ယောက်၊ Webdesigner တစ်ယောက်မဟုတ်ရင် မလိုအပ်တဲ့ font တွေကို အပြီးတိုင် ဖယ်ထုတ်ထားလို့ ရပါတယ်။
Photoshop လို ပရိုဂရမ်မျိုးဟာ ဖွင့်ချိန် အရမ်းကြာမြင့်တာဟာ သူ့ရဲ့library ထဲကို အသင့်သုံးပစ္စည်းတွေကို ခေါ်ယူနေတာကြောင့်ပါ။ အဲဒီ လိုမျိုးပဲ တခြားပရိုဂရမ်ေ်တွဟာ ကြာနေတတ်တာဟာလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပြီင်္း အဒီထဲက အကြောင်းတစ်ခုက ‘Fonts’ တွေကို loading လုပ်နေရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
– Folder အသစ်တစ်ခု ဆောက်ပါ။ အသုံးမလိုတဲ့ Fonts တွေကို သီးသန့် ပေါင်း စုထားပြီး၊ control panel
Font အရွယ်အစား ပြောင်းလဲ ကြည့်နိုင်ရန်
– Ctrl ကို ဖိထားရင်း keyboard အပေါ်တန်းက “+” ကို နှိပ်ပါ။ နှိပ်လေလေ font နဲ့ webpage စာမျက်နှာ
Error report ကို ပယ်ဖျက်ပါ။
– ပြီးရင် Advanced ကို click နှိပ်ပါ။Aဲဒီထဲကမှ ‘Error Reporting’ Disable ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး OK နဲ့ ထွက်ပါ။
– ‘Browser’ လုပ်လိုက်ရင် ပရိုဂရမ်တွေ အစီအ ရီ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကြိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး
Open-with ဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန်ပါတယ်
Filmstrip နဲ့ ရုပ်ရှင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
IE ရဲ့ homepage ကို Blank လုပ်ထားပါ။
Domain တွေကို key နဲ့ သုံးပါ။
– www. google.com ကို သွားဖို့ အ တွက် အ ရှည်ကြီး ရိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူး။
– google ကို ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Ctrl key ကုိင်ထားပြီး Enter ခေါက်ပါ။ အဲဒီလို short-cuts တွေကို လေ့လာရင်း
‘Animated dog’ ဟာ လေးလံပါတယ်။ ပယ်ဖျက်ထားပါ။
– Animated object မရှိတော့တဲ့ Aတွက် Search box ဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန် လာပါလိမ့်မယ်။
Network အတွင်းလေ့လာ ကြည့်ခြင်း
MP3 သီချင်းတွေကို ကလစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့ ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
– Keyboard က ‘print screen preview’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဖွင့်ထားတဲ့ ပုံရိပ် အနည်းငယ်သာ လိုချင်ရင် Alt
– ပြီးရင် Start > Run box မှာ ‘mspaint’ဆိုပြီး စာရိုက်ပါ။ (ရိုးရိုး paint program ကို ခေါ်သုံးရင်လည်း
– paint ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ‘Ctrl+V’ ဒါမှမဟုတ် ‘File menu’ အောက်က ‘paste’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဤ paint
– နောက်ဆိုရင် Screen Saver ဟာ ရုပ်ရှင်တွေ ပြသလိုမျိုး ပုံရိပ်တွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးနိူင်အောင်
– (My Picture folder ထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Image တွေကို အရင်ဆုံးထည့်ထားရပါမယ်။ Slide Show မှာ
Pop-up တွေကို လက်မခံပါနဲ့။
– အဲဒီအထဲကမှ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင် ထားတဲ့အတွက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ
Private data ကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။
– IE ကိုဖွင့်ပါ။ Tools Menu မှာ ရှိတဲံ့ internet options ကနေ Clear History ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ‘Cache’
– Privacy ကို ကလစ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ box ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ “private data” တွေ့ရပါမယ်။ “Setting” ကို ၀င်ပြီး
– Uninstall ဆိုပြီးပေါ်လာပါမယ်။အဲဒီထဲမှာ ကိုယ် uninstall လုပ်စဉ်တုန်းက အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့်
Mouse ကို ချောမွေ့ စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
– ‘Mice and other pointing serices ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ mouse ကို right click နှိပ်ပြီး properties
Restore point ကို ဖျက်ပစ်ပါ။
– Start > All Programs > Accessories > System tools > Disk Clean up > More Options အထိ
– Analyzing လုပ်တာနဲ့ Defragment လုပ်တာ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီလောက် အချိန်
‘Virtual memory’ တည်ဆောက်ခြင်းဟာလည်း စနစ်ကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။
– ပြီးရင် “customize” box ကို ‘on’ ပြီးတဲ့ အခါမှာ C.D.E ရှိတဲ့ drive တစ်ခုချင်း စီကို လိုသလောက် virtual
– Shutdown icon ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို လိုအပ်သလို ပြန်လည် ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ Log-on buttom
အားလုံး အဆင်ပြေပါစိ ….ကျွန်တော် မောင်ငလုံးရဲ့ စေတနာပါ
ကျွန်တော်တို့တွေ အတွက်ကျော်ချင်တာကျော်ရအောင် ဒီ Proxy site တွေက တခုမဟုတ်တခု တော့ အသုံးတည့် မှာပါ။ http://www.easyin16.info/ http://www.wiggleproxy.info/ http://dowsh.info/ http://ipr0xy.info/ http://bypassunblock.net/ http://www.unblockandsurf.info/ http://www.anonymouswebsurfing.info/ http://www.surfcute.info/ http://wisha.info/ http://vixtunnel.info/ http://surfwecan.com/ http://www.abeboproxy.com/ http://www.funkyprox.com/ http://easysurfing.co.cc/ http://facebookunblock.biz/ http://www.theproxyplanet.com/ http://www.hidemyass.com/ http://internetfilter.be/ http://www.surfall.net/ http://stealthrealm.com/ http://www.hotunblock.com/ http://www.buxot.com/ http://www.surftub.info/ http://northproxy.co.cc/ http://sneaking.org/ http://mozillaproxy.info/ http://screwteachers.info/ http://p-tunnel.info/ http://ara-bux.info/ http://www.dcsproxy.com/ … Continue reading →
CD ROM Virus လေးလုပ် ရအောင်
ဘာprogramမှမလိုပါဘူး ။ notepad လေးရှိ ရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ CD Rom ကို ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ virusလေးပေါ့။
၁။ notepad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
၂။ အောက်မှာပေးထာတဲ့ code ကို copy လုပ်ပြီး paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၃။ ပြီးရင် vbs type နဲ့ save လိုက်ပါ။ ဥပမာ- name.vbs
၄။ အားလုံးပြီးသွားရင် run ကြည့်လိုက်ပါ။
၅။ stop လုပ်မယ်ဆိုရင် task manager က process ကိုသွား ပြီးရင် wscript.exe ကို end process လုပ်လိုက်ပါ။
သူငယ်ချင်းတွေကို တော်တော် နောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ laptop ဆိုသိပ်မသိသာပေမယ့် desktop ဆိုရင် မသိတဲ့ လူဆို တော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။
ကဲ အားလုံးအဆင်ပြေ ပါစေ……..
Browser မရှိဘဲ Website တွေ ကြည့်ရအောင်
Browser မရှိဘဲ Website တွေမကြည့်ချင်ဘူးလား။ Browser ဆိုဒါက IE,Firefox,Flock စတဲ့ အင်တာနက်သုံးဖို့ လုပ်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲလေးတွေပါ။တခါတလေ ကိုယ့် မှာ ဘယ် Browser မှလဲ တင်မထားဘူး websit တွေလဲ ကြည့်ချင်တယ်ဆို တဲ့ အခြေအနေမှာ ဒါလေးက အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။Browser တွေလို တော့ အဆင်တော့ သိပ်မပြေဘူးပေါ့။
windows မှာပါတဲ့ tools လေးတွေနဲ့ ကြည့်လို့ရစေမယ့်နည်းလမ်းလေးပါ။ အဓိကရည်ရွယ်တာကတော့ Windows မှာပါတဲ့ Tools လေးတွေကို ဘယ်လိုသုံးလို့ရနိုင်တယ် ဆိုတာလေးတွေကို သိစေချင်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ဝေမျှပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့အဆင်ပြေသလို အသုံးပြူနိုင်ပါစေ။